Madax weyne Mustafe oo qurba joogta kula dardaarmay inay si waafi ah uga qayb qaataan maalgalinta iyo horumarka deegaanka. - Hargeele - Wararka Somali State
January 9, 2020 145
Madaxwaynaha DDS madaxweyne mustafe muxumed cumar oo kasoo qaybgalay kulanka wada tashiga qurbojoogta iyo xukuumada deegaanka, ayaa kula dardaarmay,qurbojoogta in ay sii xoojiyaan kaalintooda maalgashi iyo ka qaybqaadashada geedi socodka horumarineed ee deegaanka. Waxa uuna ucaddeeyay,inay xukuumaddu,hiil iyo hooba lagarab joogto qurbojoogta deegaanka,siay uga faaiideeyaan aqoonta iyo maalka ay soo tabcadeen.
Miyaa la joogaa oo la gaaray waqtigii uu Gareth Bale ka tagi lahaa Real Madrid? Wakiilkiisa ayaa ka jawaabaya
Mashruuc loogu tala galay deegaanada xoolo dhaqatada oo la daah-furey.